Trump oo maxkamad ka billaabay dagaalka doorashada ee Joe Biden | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Trump oo maxkamad ka billaabay dagaalka doorashada ee Joe Biden
Haweeneyda afhayeenka u ah madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay in dacwad ka dhan ah guusha Joe Biden uu doorashada ka gaaray in ay billaabatay.
“Doorashada ma dhammaan,” ayey tiri, xoghayaha warbaahinta ee Aqalka Cad, Kayleigh McEnany, oo shir jaraa’id qabatay.
Waxay jeedisay eedo ay ku sheegtay in doorashada la muqsuqmaasuqay, inkasta oo ay soo dhigin wax caddeyn ah oo muujinaya in doorashada la khiyaamay, ayna saameysay natiijada doorashada ka soo baxday.
Trump, oo ahaa musharraxa xisbiga Jamhuuriga ayaan weli oggolaan natiijada doorashada ka soo baxday.
Biden iyo Trump maxay kala qabanayaan?
Sabtidii ka dib, Tan iyo markii ay warbaahintu saadaaliyeen inuu Mr Biden ku guuleystay gobolka labada musharrax uu loollanka adag ku dhex maray ee Pennsylvania, isu geynta codadka uu helay ayaa sii sallaxday rabitaankiisa ahaa inuu awoodda aqalka cad uu la wareego.
Donald Trump ayaa markale Isniinta bartiisa Twitter-ka ku soo qoray arrin dood ka dhalisay natiijada isaga oo ku andacooday sheegashooyin aan la xaqiijin oo ah “ficil aan macquul ahayn oo sharci darro ah codbixinta la xiriira inay dhacday”.
Maamulka adeegga guud ee maamulo hay’adaha Federalka ee dalka Mareykanka, ayaa hakad gelisay in loo oggolaado kaaliyeyaasha Biden iney toos u billaabaan howlaha kala guurka ee xilka uu kula wareegayo, madaama weli aan si rasmi ah loo hubinin qofki ku guuleystay doorashada.
CBS News, waxay sheegtay in kooxda Biden ay eegayaan fursadaha sharciyeed ee jira haddii maamulka Trump uu diido in xilka uu wareejiyo.
Wariyaha Aqalka Cad ka soo warrama, wuxuu sheegay, inkastoo uu diiddan yahay, Trump inuu xafiiska ka tago bisha January, haddana waxaa soo baxaya hadal hayn ah in uu doonayo in doorashada 2024 uu tartamo.
Maxay tahay doodda Trump?
Shirka jaraa’id ee ay Isniinti qabatay afhayeenka madaxweyne Trump iyo xubnaha ugu muhiimsan xisbiga Jamhuuriga waxay soo jeediyeen eed ah in doorashada la musuqay iyagoo saxaafadda ka codsaday inay gacan ka geystaan baaritaannada xaqiiqada lagu ogaanayo.
Warbaabinta Fox News, oo madaxweynaha xiriir aad u dhow horay ula lahayd, waxay joojisay baahinta arrintaasi iyada oo sheegtay in aanan caddeyn loo haynin.
Ms McEnany waxay warfidiyeennada u sheegtay: “Waxaan billawnay oo keli ah marxaladdi lagu xaqiijin lahaa cododka oo si hufan oo kalsooni leh loogu tirin lahaa.”
Waxayna ku doodeysaa in goob joogayaasha cod tirinta u qaabilsanaa xisbiga Jamhuuriga aysan helin fursad ay ku kormeeraan tirinta codadka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania.
Hase yeeshe, xubnaha u xilsaarnaa arrimaha doorashada ee Philadelphia, waxay sheegeen in dhammaan wakiillada xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga-ba ay ku sugnaayeen goobta codka lagu tirinayey ayna u jireen masaafa aan ka badneen 30 miitir iyada oo dadka loo kala fogeeyey si looga gaashaanto faafitaanka faayraska corona.
Ms McEnany waxay sida oo kale ku doodeysaa in wakiillada labada xisbi ee gobolkaasi muhiimka ah ee goob jooggay aysan tira ahaan sinneyn.
Haweeneyda madaxa ka ah guddiga heer qaran ee Xisbiga Jamhuuriga, Ronna McDaniel, waxay sheegtay in baaritaanno hordhac ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen astaamo ama caddeymo illaa 131 gaaraya oo muujinaya khaladaadka doorashada Michigan ka dhacay.
Maxay tahay tallaabadan sharci ee ugu dambeysa?
Olololaha Trump ayaa Isniintii dacwad u gudbiyey maxakamadda Federaalka ee ku taalla gobolka Pennsylvania, waxayna doonayaan in tallaabba degdeg ah oo lagu joojinayo guusha Mr Biden la qaado. Dacwad oogaha guud ee gobolkaasina wuxuu sheegay in acwaddu ay tahay “mid aan mudnaan badan laheyn”.
Gobolkan oo ay ku xooggan yihiin Jamhuuriga, wuxuu dambi baaraha gobolkaasi sheegay in doodda ay tahay mid ku aadan natiijada xilka madaxweynaha.
10-ka garyaqaan ee guud ee gobolkaas ayaa dacwad ay u bixiyeen faahfaahin raadin, u gudbiyay maxkamadda sare ee Mareykanka oo taageeraysa dacwadda ololaha Trump ee Pennsylvania.
Waa sidee xaaladda tirinta codadka gobollada kale?
Natiijadi talaadadi hore ka soo baxday doorashada madaxweynaha ee gobollada Georgia, Arizona, North California iyo Alaska, weli muran ayaa ka taagan.
Brad Raffensperger, oo la socday doorashada Georgia ka dhacday wuxuu yiri: “Cod bixinta si sharci ah miyey u dhacday? waan hubaa si sharci ah ayey u dhacday. Xafiiskaygana baaritaanka guud ayuu wadaa.”
Gobollada waa inay xalliyaan dib u tirinta codadka iyo doodda sharciyeed ee ka dhalatay natiijooyinka ugu dambeyey ee 8-dii December.
Wixii natiijo ah oo halkaasi ka soo baxana waxaa go’aan kama dambeys ah ka gaaraya xubnaha guddiga doorashada ee Mareykanka oo kulmayo 14-ka December.
Previous articleMusharaxiin Madaxweyne oo War cusub soo saaray kuna dhawaaqay Go’aano adag
Next articleMidowga Afrika oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda Tigray
Dowlada Ingariiska oo Dowladaha sida waa weyn u saameeyey Cudurka Halistaah ee Karoona 19 ayaa hada u muuqata mid mar kale halis sii galiyey...